Aging brain - Dr.PhyoMaungMaung
အသက်အရွယ်ဆိုတာ neurodegenerative diseases, အများစုရဲ့ ပင်မအကြောင်းတစ်ခုပါ။Neurodegenerative disease ဆိုတော့ ဦးနှောက်အာရုံကြော ပျက်စီးလို့ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေပေါ့။သတိမေ့ခြင်း (cognitive impairment),အေဇိုင်းမားရောဂါ(Alzheimer’s disease)၊ဦးနှောက်ပိုင်း သွေးကြောရောဂါများ (cerebrovascular disease),ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Parkinson’s disease )တို့ပါဝင်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကို အများစုက အာရုံစိုက်နေချိန်မှာ ရောဂါမရှိတဲ့ aging brain လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေကလည်း အတော်လေးကောင်းမွန်ပြီး အကျိုးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။
အသက်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ၊လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက်ကတော့ ဦးနှောက်ဆဲလ်ရဲ့ gene တွေအထိထင်ထင်ရှားရှားပြောင်းသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ဖတ်နေရင်းတောင် အတော်လေး ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမို့ aging brain နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆောင်းပါးရေးလိုက်ပါတယ်။Ageing brain နဲ့ပတ်သတ်လို့ အနှစ်ချုပ် ဆယ်ချက်ကို ပထမဆုံးစရေးပါ့မည်။
Aging brain များသည် ဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပုံသွင်းခြင်း plasticity လို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးနှောက်တွင်းက အာရုံကြောပတ်လမ်းတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖန်တီးတာပါ။အသက်ငါးဆယ်ကျော်လျှင် လူအများစုရဲ့ မှတ်ဉာဏ်က ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။Brain plasticity, ကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဆိုလျှင် မှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းမှု သက်သာသွားပါတယ်။ဦးနှောက်ကို နိုးကြားအောင်နေပါ။အသစ်သစ်သော အရာတွေသင်ယူဖို့ မိမိကိုယ် မိမိ စိန်ခေါ်ပါ။ဒါဆို brain plasticity, ကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်။one from Posit Science လို brain plasticity, မြှင့်တင်ပေးတဲ့ programme တွေရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်တိုင်းက အသက်ကြီးတာနဲ့ ပြောင်းတတ်ပါတယ်။တစ်ချို့ပြောင်းလဲမှုက အသက်သုံးဆယ်လောက်မှာ စဖြစ်တယ်။အသက်ကြီးသွားတာနဲ့ ပိုထင်ရှားလာတယ်။သဘာဝအားဖြင့် ဦးနှောက်က မလိုအပ်တဲ့ အာရုံကြော အဆက်( synapses) လေးတွေကို ဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ အာရုံကြောအဆက်တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ထိခိုက်မှုတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ရောင်ရမ်းခြင်းတွေက ဦးနှောက်ကို ပြောင်းလဲစေတယ်။အသက်ကြီးသွားလျှင် ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေသေသွားတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပေမယ့် ဦးနှောက်က နဂိုအတိုင်းဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေတောင် ဆက်လက်ပွားများနိုင်တယ်ဆိုတာ အထူးသတိပြုရပါမည်။
ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ နယ်ပယ်သုံးခုရှိပါတယ်။(၁) စိတ်ခံစားမှု (၂) နေထိုင်ရာ ဒေသ နှင့် လှုမှုဆက်ဆံရေး (၃) ဇီဝကမ္မ နှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု တွေက ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း သို့ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ယုံကြည်မှုတွေက brain health အတွက်အရေးပါပါတယ်။ဘဝလူနေမှု အဆင့်အတန်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်း ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နှလုံးကျန်းမာရေး နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း အရေးပါပါတယ်။
4.Plaques and tangles.
Amyloid plaques လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်အတွင် amyloid ပရိုတိန်းအစုအဝေးစုပုံခြင်း နှင့် neurofibrillary tangles လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်အာရုံကြောအမျှင်တွေ ရှုပ်ထွေးခြင်းက Alzheimer ရောဂါကိုဖြစ်စေတယ်လို့ စပြောနေပါပြီ။ဦးနှောက်ဆဲလ် အပြင်မှာ plaques တွေစုပုံပြီး ဆဲလ်တွင်းမှာတော့ tangles တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတတ်ပါတယ်။အသက် နှစ်ဆယ် ငါးနှစ်ကျော်မှာစဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဦးနှောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ calcification လို့ခေါ်တဲ့ အနည်ကျဆင်းဖြစ်စဉ်က ရောင်ရမ်းခြင်းနောက်ဆက်တွဲဆက်ဖြစ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ အဆုံးသတ်ဖို့ အခုနောက်ပိုင်းတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြောနေကြတာပါ။
Dementia ဆိုတာ သတိမေ့တယ်ပဲပြောရမလား။သတိမေ့ရူးသွပ်တယ်ပဲပြောရမလား။သေချာတာကတော့ dementia ခံစားနေရသူတွေဟာ အဖြစ်အပျက် တော်တော်များများကို မေ့သွားကြတယ်။၆၅ နှစ်အောက်မှာ ဖြစ်ခဲပါတယ်။၆၅ နှစ်မှာ ၁-၃% လောက်ပဲဖြစ်လေ့ရှိတယ်။၈၅ နှစ်အထက်ဆို လူတစ်ဝက်လောက်ဖြစ်တတ်တယ်။အဓိက အကြောင်းက အေဇိုင်းမားရောဂါကြောင့်ပါ။လေဖြတ်ပြီးတဲ့ လူနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကို Vascular dementia, လို့ခေါ်တယ်။ရောဂါတွေ၊တစ်ချို့ဆေးတွေ၊အဆိပ်တွေကလည်း dementia ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက လူလတ်ပိုင်းလူတွေရဲ့ ဦးနှောက်က ကျဆင်းစပြုလာပြီ လူငယ်တွေလောက် အသုံးမကျဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများတွေးခဲ့ဖူးတယ်။အခုတော့ ဒီလိုတွေးတာမှားခဲ့ပါတယ်တဲ့။သတ်လတ်ပိုင်းလူတွေရဲ့ ဦးနှောက်က ပိုနားလည်သဘောပေါက်လွယ်တယ်။ဖြစ်စဉ်တွေပိုမှတ်မိတယ်။လူငယ်တွေထက် အဖြေရှာရာမှာ ပိုသာတဲ့ ဦးနှောက်ရှိတယ်လို့ တွေ့ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းအတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသိဉာဏ်ပညာဆိုတာ အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ရပ်ကို သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
လူအများစုဟာ မရည်ရွယ်ပဲ မေ့တတ်တာကို လေ့ကျင့်ပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။လူရဲ့ဦးနှောက်မှာ အာရုံကြော အဆက်လေးတွေရှိတယ်။သုံးတဲ့ အဆက်လေးတွေက ဆက်လက်ရှင်သန်နေပြီး အသုံးမပြုတာကြာလျှင် အလိုလိုပျက်စီးသွားတတ်တယ်။တစ်ခုခုမေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပစ္စည်းတစ်ခု အထားမှားလို့ ပျောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေးမိတာက ငါတို့ အသက်ကြီးလို့ သတိမေ့တတ်လာပြီးလားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။တွေးလိုက်တာနဲ့ ဦးနှောက်က ထိုအတွေးကို ဆက်တွေးဖို့ အာရုံကြောအဆက်လေးတွေ ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီး သတိမေ့တတ်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တယ်။ဒီလို အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင် ပစ္စည်းတွေကို နေရာတကျထားတာမျိုးတွေ၊လူတွေရဲ့ နံမည် နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်မိနိုင်အောင် ကြိုးစားတာတွေ လုပ်ပေးလျှင် မေ့တတ်တာတွေ သက်သာလာတယ်ဆိုပါတယ်။
မျိုးရိုးအားဖြင့်လည်း တစ်ချို့လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်က စောစီးစွာအိုမင်းသွားတတ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် aging brain လက္ခဏာတွေပို ဖြစ်လွယ်တယ်။သွေးတိုးရောဂါ၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊အဝလွန်ခြင်း၊ကိုလက်စတောများခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၊ဆီးချိုရောဂါ နှင့် ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုတို့ကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ aging brain လက္ခဏာတွေရတတ်တယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံကို ချောမွေ့စေတယ်။တစ်ကြိမ်ကို မိနစ် ၃၀ နဲ့ တစ်ပတ် ၃ ကြိမ်လောက်ပြေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင်တောင် အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ သတိမေ့တာသက်သာတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်တွင်း ဆဲလ်သစ်တွေတိုးပွားလာစေပြီး ဦးနှောက်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးစားခြင်းက ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေတယ်ဆိုပါတယ်။လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖမ်းထားတဲ့ ဆော်လမွန်ပဲကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်။ဆော်လမွန်ငါးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အဆီတွေပါပြီး စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာတယ်။နှလုံးကျန်းအာရေးကောင်းတယ်။လေဖြတ်တာကို ကာကွယ်ပေးတယ်။dementia ကိုလည်း သက်သာစေတယ်။
Aging brain လက္ခဏာတွေကို လျော့ချပေးနိုင်မဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းခြင်း (failing memory ), ဦးနှောက်ကျုံ့သွားခြင်း (brain atrophy ), နဲ့ dementia တွေဟာ နေထိုင်စားသောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလို့ ဦးနှောက်အထူးကု Dr. David Perlmutter, က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သကြားအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်း နှင့် ဂလူတန်ဟာ အဓိက တရားခံတွေလို့ဆိုပါတယ်။အခြားဖြစ်စေသော အကြောင်းများစွာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အေဇိုင်းမားရောဂါအပြင် aging brain လက္ခဏာတွေ သက်သာပျောက်ကင်းအောင် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံကို Dr.Mercola ကတင်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲကမှ အချို့ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေလေ့လာနိုင်အောင် ရေးပေးပါတယ်။
A. စားသောက်မှု လမ်းညွှန်
သကြားရှောင်ပါ။Fructose များတာရှောင်ပါ။သကြားစားသုံးမှုစုစုပေါင်းက တစ်ရက် 25 grams အောက်စားပါ။ဆီးချိုရှိလျှင် တစ်ရက် 15 grams လောက်ပဲစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေမှာ စမ်းတာကတော့ သကြားများများတစ်ပတ်လောက်ကျွေးရုံနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။
Gluten က အူနံရံယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေပြီး ဦးနှောက်ပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်ရေးပါတယ်။ဒါပြင် ရောင်ရမ်ခြင်း နှင့် ခုခံအားစနစ်က မိမိကိုယ်ကို ရန်သူအမှတ်နှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း ( autoimmunity ) ကိုဖြစ်စေပါတယ်။Dr. Perlmutter ရေးတဲ့ Grain Brain, ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ အစားအသောက်ထဲက gluten နဲ့ caesin ပါတာကို ဖယ်လိုက်လျှင် အေဇိုင်းမား ဖြစ်ဖို့အတော်လေး အခွင့်အရေးနည်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Aim for an organic diet to avoid agricultural chemicals
ပိုးသတ်ဆေး မသုံးတဲ့သဘာဝအစားအစာတွေရွေးစားပါ။ပိုးသတ်ဆေးတွေက အူလမ်းကြောင်းက အကျိုးပြုပိုးတွေကိုသေစေပြီး ရောဂါပိုးတွေပွားများစေပါတယ်။ဒါကြောင့် အစာမှာပါတဲ့ အဆိပ်တွေ မဖယ်နိုင်လျှင် ဦးနှောက်ပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Eat plenty of folate-rich vegetables.
ဒေါက်တာက folic acid, မသောက်ဖို့ပြောပါတယ်။သူဆိုလိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာက folate လိုတဲ့အခါ folic acid ထည့်တာ မကောင်းဘူးဆိုပါတယ်။Folate ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်လို အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အရွက်တွေစားခိုင်းပါတယ်။အစိမ်းရောင်ရွက်တွေမှာ folate အပြင်magnesium လည်းပါပါတယ်။ဦးနှောက်တွင်း magnesium လုံလုံလောက်လောက်ရှိလျှင်အေဇိုင်းမားရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာလာတယ်ဆိုပါတယ်။
ဦးနှောက်အကျိုးပြု အဆီတွေကို သဘာဝထောပတ်၊သံလွင်ဆီ၊အုန်းဆီတွေက ရပါတယ်။Omega3ကတော့ မွေးမြူရေးငါးစားမဲ့အစား supplement ဝယ်သောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
အူလမ်းကြောင်းမှာ အကျိုးပြု ပရိုဘိုင်အိုတစ် ဖြည့်ပါ။
B. နေထိုင်မှု လမ်းညွှန်
Exercise regularly – လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ။
Get regular sleep – အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။
Address your stress – စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချပါ။
Optimize your vitamin D levels with safe sun exposure – သွေးတွင်း vitamin D နည်းခြင်း နဲ့ အေဇိုင်းမားရောဂါက ဆက်စပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် vitamin D ရအောင်နေရောင်ခံပါ။